घर निर्माण गर्दा वास्तु शास्त्रलाई ख्याल गरौँ - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
घर भनेको चार वटा भित्ता, एउटा छानो र टेक्ने एउटा धरातल मात्रै होइन । यसले घामपानीबाट त जोगाउँछ नै विभिन्न विपत्ति र भयावह स्थितिमा साथ दिन्छ । तर जतिसुकै बलियो र रङ्गरोगनयुक्त घर बनाएता पनि यदि घरको वास्तु शास्त्र ठिक छैन भने तपाईँले आफ्नो सुरक्षार्थ खडा गर्नुभएको घर तपाइकै वैरी बनिदिन्छ । यस कारण पनि घर बनाउँदै हुनुहुन्छ या विभिन्न समयमा घरका विभिन्न बिघ्नबाधाहरू देखिने गरेका छन् भने तपाइले निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनु उत्तम हुनेछ ।
नेपाली समुदायमा कुनै पनि व्यक्तिले घर निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ । घर निर्माणले मानिसलाई सामाजिक प्रतिष्ठा भन्दा पनि बढी मानसिक सन्तुष्टि दिने गर्दछ । घर निर्माणको दौरान अपनाइएको सानो असावधानीले सन्तुष्टिको बदलामा अनेकन पीडाहरू थप्ने कारण घरको वास्तु शास्त्र बनिदिन्छ । जिन्दगीभरको मिहेनत खर्चेर तपाईँ एउटा घर खडा गर्नुहुन्छ तर वास्तु शास्त्र सम्बन्धी ज्ञानको अभावका कारण घरले नै तपाईँलाई पिरोलिरहने गर्दछ ।
सर्वप्रथम हामीले जान्न जरुरी छ:
वास्तु शास्त्र के हो ?
वास्तु शास्त्र प्राचीन विज्ञान हो। वास्तुको अर्थ हुन्छ आवास गृह अर्थात् घर र शास्त्रको अर्थ हुन्छ अनुशासन र निर्देश। यसर्थ, “वास्तु शास्त्र” भन्नाले घर वा कुनै संरचना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुराको निर्देशलाई बुझिन्छ । वास्तु शास्त्रलाई आधुनिक समयको विज्ञान र आर्किटेक्चरको प्राचीन स्वरूप मान्न सकिन्छ। हिन्दु धर्म अनुसार वास्तु शास्त्रको पालन गरी बनाइएको घरमा बस्दा सुख, शान्ति एवं समृद्धि प्राप्त हुन्छ।
घर निर्माण गर्दा वास्तुको प्रभाव प्रत्येक स्थान एवं वातावरणमा पर्छ । यस कुराको वैज्ञानिक रूपमै प्रमाणित हुँदै जाँदा त्यसको प्रयोग संसारका विभिन्न स्थानमा भइरहेको छ । वास्तुशास्त्रका प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक तथ्य आधुनिक विज्ञानको कसीमा पनि उत्तिकै लागू हुँदै छन् । वास्तुको वैज्ञानिक आधार भनेको प्रकृति, वातावरणमा रहने पञ्चतत्व, पृथ्वीको चुम्बकीय तरङ्ग एवं गुरुत्वाकर्षण शक्ति मात्र नभएर हाम्रो शरीरमा रहने चुम्बकीय ध्रुव, ऊर्जा शक्ति, सतह, उचाइ, ज्यामितीय आकार, चुम्बकीय दिशा, भौगोलिक दिशा, अंश विश्लेषण, सौर्य ऊर्जा, पृथ्वीको सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने विशेषता आदि पनि हुन् ।
वास्तुअनुसार कहाँ-कहाँ के-के राख्ने ?
पछिल्लो समय नेपालमा महाभूकम्पको कारण घर पुनर्निर्माणको कार्यले तीव्रता पाइरहेको छ । कटि ठाउँमा घर पुनर्निर्माण भइसकेका छन् भने केही स्थानमा अझै पनि बाँकी नै छ ।
यदि तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ या बनाएर भर्खरै सक्नुभएको छ भने वास्तुदोषलाई विशेष ध्यान दिनुहोला । घरको जग खन्नेदेखि झ्याल–ढोका राख्ने, आन्तरिक सजावटसम्म वास्तुअनुसार गर्नुहोला ।
वास्तुअनुसार बेड रुम, बाथरुम, किचेन, बैठक, अतिथि कक्ष, स्टोर रुम तथा भर्‍याङ आदि उचित ठाउँमा निर्माण गरे जीवनका हरेक क्षणलाई सकारात्मक बनाउन सकिन्छ ।
घरको मूल ढोका र कोठाहरू प्रशस्त प्रकाश छिर्ने गरी निर्माण गर्नुपर्छ । घर नजिकै ठुला बोट–बिरुवा, क्याक्टस आदि रोप्नुहुँदैन ।
भान्छामा ऐना राख्नुहुँदैन ।
घरमा टुटे फुटेका ऐना तथा बन्द भएका वा बिग्रिएका घडी राख्नुहुँदैन । ऐना तथा मुख धुने धारो उत्तर वा पूर्वको भित्तामा राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
कुनै पनि घरको मूल ढोका अर्को घरको मूलढोकाको सामुन्ने (अगाडि) हुनुहुँदैन ।
बिमको ठिक तल बस्नु एवं सुत्नुहुँदैन ।
घरअगाडि तुलसीको बोट रोप्नु शुभ हुन्छ ।
दक्षिण–पश्चिम दिशा घरका ज्येष्ठ सदस्यका लागि लाभप्रद मानिन्छ ।
भर्‍याङमुनि पूजा कोठा तथा ट्वाइलेट बनाउनुहुँदैन ।
घर वा जग्गाको बिच भागमा रहेका इनार–कुवा आदि अशुभ मानिन्छन् ।
वास्तु शास्त्रमा अनुसार घरको शोभा बढाउन र घरमा खुसियाली कायम गर्न रङ्ग निम्न कुराहरु ध्यानमा राखी घर बनाउनु पर्छ :
पूजा कोठामा कस्ता तस्बिर र मूर्ति लगाउने ?
वास्तुअनुसार, मन्दिर घरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान हो । प्रत्येक घरमा भगवानको तस्बिर तथा मूर्ति राखिएको हुन्छ । भनिन्छ, घरको सही ठाउँमा भगवानको सही मूर्ति राख्नुपर्छ । भगवानको पूजा र ध्यानबाट हामीलाई शक्ति मिल्ने मात्रै होइन, यसले मस्तिष्क तथा धार्मिक रूपले सन्तुष्टि पनि पाउँछौ । वास्तुशास्त्रका अनुसार, घरको उत्तर–पूर्वी दिशामा पूजा घर हुनुपर्छ ।
भगवानको मूर्ति मानेर जुनसुकै मूर्तिहरूलाई पनि आफ्नो पुजा कोठा या मन्दिरमा राख्नु अशुभ मानिन्छ । यसो गर्दा तपाइको मन अशान्त रहने साथै घरमा लक्ष्मीको वास नरहने जनविश्वास रही आएको छ ।
जान्नुहोस्, पूजा कोठा अथवा घरभित्रको मन्दिरमा कस्ता तस्बिर र मूर्ति लगाउनुपर्छ ? र, कस्ता मूर्तिहरू राख्नु हुन्न ?
भगवान् शिवको मन जब अशान्त हुन्छ तब उनी ताण्डव गर्न थाल्छन् । शास्त्रहरूको अनुसार भगवान् शिवले ताण्डव गर्दा पुरा संसार काँप्ने गर्दछ । यदि तपाईँ आफ्नो पूजा कोठामा ताण्डव गरिरहेका भगवान् शिवको मूर्ति राख्नुहुन्छ भने तपाईँको घरमा लडाई, झगडा र ताण्डव जस्तो माहौल पैदा भइरहने खतरा बढ्दछ ।
माता दुर्गाले राक्षसहरूको विनाश गर्नको लागि महाकालीको रूप धारण गरेकी थिइन् । महाकाली सदैव क्रोधमा रहन्छिन् । यस्तैमा यदि तपाईँ आफ्नो पूजा कोठामा दुर्गाको विश्वंशक रूप महाकालीको मूर्ति राख्नुहुन्छ भने घरमा सधैँ रिस तथा चर्काचर्कीको माहोल बनिरहन्छ ।
शास्त्रहरूको अनुसार भगवान् शनिदेवले आफ्नी पत्नीद्वारा श्राप पाएका थिए । श्राप मुताबिक भगवान् शनिको नजर जुन मानिसमा पर्दछ ऊ सर्वनाश हुनेछ । उसो त शनि न्यायका देवता हुन् । तर श्रापका कारण शनिको मूर्तिलाई आफ्नो घरमा राख्दा घरमा नकारात्मक असर पैदा हुनेछ ।
भगवान् भैरवनाथ भगवान् शिवको प्रतीक हुन् । भैरवनाथको पुजाआराधाना पुरा तनमन र तन्त्र-मन्त्रद्वारा गरिन्छ । तन्त्र-मन्त्र मतलब दोस्रो व्यक्तिको सम्पूर्ण तवरले आफ्नो वशमा ल्याउनु । यदि तपाईँ भैरवनाथको मूर्ति आफ्नो पुजाकोठामा स्थापित गर्नुहुन्छ भने तपाईँ हरबखत कुनै न कुनै व्यक्तिको वशमा रहीरहनुहुनेछ ।
खडा भएकी माता लक्ष्मी
यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि आफ्नो घरमा हरहमेसा धनदौलतको उपस्थिति बनिरहोस्, तब तपाईँले खडा भएकी माता लक्ष्मीको मूर्तिलाई आफ्नो पुजाकोठाबाट हटाउनु भए हुन्छ । खडा भएकी लक्ष्मीले कहिल्यै पनि तपाइको घरमा लक्ष्मी टिक्न दिनेछैन । लक्ष्मी घरका बचाई राख्न बसेकी माता लक्ष्मीको मूर्ति पूजाकोठामा स्थापित गर्नु उत्तम हुनेछ ।
राहू एक दैत्य थियो जसलाई भगवान् विष्णुले समुन्द्र मन्थनको सयमा वध गरेका थिए। वध गरिरहेको बखत भगवान् विष्णुले दैत्यलाई दुई टुक्रा पारेका थिए । एक टुक्राको नाम राहू रह्यो भने अर्को टुक्राको नाम केतू रहन पुग्यो । यदि तपाईँ आफ्नो पुजाकोठामा विभिन्न ग्रहहरूमध्ये राहू-केतू को मूर्ति स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ भने दुवैको एकसाथ गर्नुहोला । राहूलाई मात्रै अलग स्थापना गर्दा तपाइको सर्वनाश हुनेछ।